Sharukh, Salman iyo Aamir – xiddigaha dhibka weyn wajahaya, midkee ka badbaadi doona? - Allbanaadir Media
Home Xogta Dahsoon Sharukh, Salman iyo Aamir – xiddigaha dhibka weyn wajahaya, midkee ka badbaadi...
Sharukh, Salman iyo Aamir – xiddigaha dhibka weyn wajahaya, midkee ka badbaadi doona?
Shahrukh Khan, Salman Khan iyo Aamir Khan – waa saddex xiddig oo waxyaabo badan isaga eg, xilligooda jilitaanka filimadana horumar weyn sameeyay. Laakiin waxay u muuqataa in hadda ay godadkooda biyo ugu galayaan.
Waxyaabaha ay ka smina yihiin saddexda Khan waxaa ka mid ah sannadka ay wada dhasheen oo ah 1965.
Taas marka laga soo tago, waxaa jiro hal wax oo kale calanka saddexdan atoore uu u taagnaa muddo ka badan 30 sano.
Markii ay soo if baxayeen, xirfaddooduna ay soo billaabaneysay, waxay la kowsadeen horumar dhinaca ilbaxnimada filimada ah. Xilli ay jireen xasarado dhaqaale ayay u suurtagashay in ay heerka ugu sarreeya ka gaaraan xirfadda jilista filimada.
Wariye Kaveree Bamzai ayaa buug uu ka qoray saddexdan atoore ee saaxiibbada ah ku xusay sida ay waqti aad u adag ugu guuleysteen inay dhisaan boqortooyo caan baxday oo dhinaca xirfadda filimada ah.
XIGASHADA SAWIRKA,WESTLAND NON-FICTION
Wareysi uu Mr Kaveree siiyay BBC-da laanteeda afHindiga ayuu ku yidhi: “Waxaa i xiisa galisay in sannadkii 1988-kii ay saddexda atooreba billaabeen xirfaddooda.”
“Waqtigaas wax walba waxay noo ahaayeen – hal kanaal, hal telefishin, hal telefoon, hal masrax. Marxalad sidaas ah ayay Hindiya ku galeysay isbaddal.”
“Marka aad eegto filimada ay ka mid yihiin ‘Dilwale Dulhania Le Jayenge’, ‘Maine Pyar Kiya’ iyo ‘Qayamat Se Qayamat Tak’, dhammaan atooreyaashan waxay muujiyeen xirfad heer sare ah oo isugu jirta doorarka jacaylka, aabanimada iyo wiilnimo intaba, qiimo aad u weyn ayayna yeesheen,” ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Wixii ka horreeyay iyaga, filimada Hindiya waxay inta badan ku saabsanaan jireen aargoosi, caddaalad darrada bulshada dhexdeeda ka jirta iyo arrimo la mid ah, balse jilayaashan waxay si habsami leh u hoggaamiyeen isbaddalkii quruxda badnaa ee lagu hormariyay waxyaabaha lagu jilo filimada Bollywood-ka.
“1990-meeyadii dadku waxay rabeen inay si fiican wax u cunaan, inay labis wanaagsan xirtaan iyo inay adduunka u safraan. Waqtigaas wixii ka horreeyay dadku waxay ku riyoon jireen inay aadaan Switzerland, laakiin jilayaashan waxay taas ugu fududaatay filimadooda,” ayuu yidhi Bamzai.
Markii ay saddexda Khan soo baxayeen waxaa sii dhimanayay tayada filimada Hindiga, balse waxay ku guuleysteen in shaleemooyinka iyo masraxyada dib loogu soo laabto.
Si fudud kuma imaanin inay noqdaan xiddigaha ugu caansan Bollywood-ka.
Shahrukh Khan oo markii uu filimada billaabayay aysan cid garab siisa ugu jirin waaxdaas ayaa ku caan baxay inuu qaato halis walba, wuxuuna shaki kasta u baddalayay guul lama filaan ah oo aad u baaxad weyn.
Filimka Baazigaar oo markii hore loo bandhigay Salman Khan balse uu diiday ayuu soo jilay Shahrukh, wuxuuna ku helay magac weyn.
Sidoo kale waxa uu la wareegay filimka “Darr” oo markii hore la siiyay Aamir Khan laakiin uu ku gacan seyray.
Labada filinba waa in atooraha uu jilo door laadarnimo ah.
Aamir Khan iyo Salman Khan waxay kasoo jeedeen qoysas jilayaal ah balse iyaga xitaa uma sahlaneyn inay xirfaddooda horumarka cajiibka ah gaarsiiyaan.
Maxay tahay dhibaatada soo wajaheysa jilayaashan?
Dhallinyaro badan iyo jiilal kala duwan ayay kusoo jiiteen xirfaddooda cajiibka ahayd, sida uu buugiisa ku xusay Bamzai.
Haddase waxaa ku yimid mowjad kale oo isbaddal ah, iyaga qudhoodii ayaana laga yaabaa inay dhibaato weyn ku wajahaan isbaddalka yimid.
Waxay saddexda atooreba xilli fiican kusoo qaateen dhalinyaranimadooda, laahiin waxaa sanadihii dambe bollywood-ka la wareegay dhallinyaro cusub oo xirfaddooda deg deg ku hormarinaya.
Dhanka kale waxay daawadeyaasha hadda usii badanayaan dhinaca filimada internet-ka, kuwaasoo sii xoogeystay labadii sano ee lasoo dhaafay inta uu jiray cudurka safmarka ah.
Salman Khan iyo Shahrukh Khan waxay isku hilmaameen bandhigyada shaleemooyinka ee jilitaanka dhalinyaranimada, hase yeeshee Aamir Khan waxaad mooddaa in uu la yimid fikrad cusub.
Amod Mehra oo ah wariye u dhashay dalka Hindiya ayaa yidhi: “Aamir wuxuu la qabsaday inuu jilo door waalidnimo ah, sida uu sameeyay filimka ‘Dangal’. Wuxuu la yimid sheekooyinka noocaasoo kale ah. Wuuna sii wadan doonaa guulaha xirfaddiisa.”
“Hadda Salman Khan iyo Shahrukh Khan waxay u baahnaan doonaan inay qaadaan tallaabo hor leh oo ay ku baddalayaan sawirkooda filimada jacaylka iyo dagaalka, haddii kale xaaladdu way ku adkaan doontaa.”
Wali waxay jilayaashan heystaan waqti ay kusii naalloodaan caannimadooda iyo jacaylka loo qabo habkooda jilitaanka, sida uu qabo Kaveree.
“Guulaha saddexdan xiddig way sii jiri doonaan muddo kale, kaddibna waxaa laga yaabaa in ay u weecdaan dhinaca filimada musalsalka ah ee Internet-ka ku baxa ama waxyaabo kale. Marka ay masraxyada dib u furmaan, dadkii uu cudurka safmarka ah guryaha ku celinayayna dib usoo baxaan waxaa sugaya taageerayaal badan oo u xiiso qaba.”